အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 16, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီသောကြာနေ့ငါတို့ဆွေးနွေးမယ် Facebook ၏လာမည့်အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု ဖေ့စ်ဘွတ်နှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်သောဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီများမှအမှုဆောင်အရာရှိအနည်းငယ်နှင့်အတူ။ သင်၏အတွက်ပြက္ခဒိန်များကိုမှတ်သားပါ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာရေဒီယိုပြ 3PM EST မှာ။ ကျနော်တို့အတွင်းပိုင်းကျုံးကြားနာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်! ဤအတောအတွင်း, သင်ဤကြည့်ရှုနိုင်သည် အီးမေးလ်စနစ်၏တရားဝင် Facebook ဗီဒီယို.
ဒီမှာကန ဦး တုံ့ပြန်ချက်ပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟာသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်စနစ်နှင့် SPAM ကိုလုံးလုံးလျားလျားဖယ်ရှားရန်အမှန်တကယ်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိသည်။ သို့သော်သူတို့ကအီးမေးလ်လက်ခံသူကိုအသုံးပြုသူအားခွင့်ပြုရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ရန်အတွက်အစားထိုးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ပြီ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိ SPAM ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။ ငါခြားနားချက်အများကြီးမမြင်မိပါဘူး
ဒီနေရာမှာဖေ့စ်ဘွတ်က SPAM ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားပေးနိုင်မလဲဆိုတာပါ။ ကျွန်တော်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့သည့်အတွေးအခေါ်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သင့်တယ် ပါ ၀ င်သော API အဲဒီအီးမေးလ်စျေးကွက်ဟာသူတို့ရဲ့ sign-up ပုံစံတွေမှာထည့်သွင်းနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ... ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်ငါအီးမေးလ်ပုံစံကိုထုတ်လုပ်လိမ့်မယ်။ အကယ်၍ အီးမေးလ်လိပ်စာ @ facebook.com တွင်အဆုံးသတ်ပါကကျွန်ုပ်သည် Facebook's သို့ဖုန်းဆက်ပါမည် API ကို သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်တွင် opt-in ယန္တရားကိုထုတ်လုပ်သည်။ Facebook သုံးစွဲသူသည် Facebook Connect နှင့်voilàမှတဆင့်ဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်ခွင့်ပြုချက်ကိုခွင့်ပြုသည်။ ယခုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကထိုသူသည်အီးမေးလ်သို့ဝင်ရောက်ကြောင်းသိလိုက်ရသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအီးမေးလ်အတွက်မည်သည့်စာပို့ခြင်းကိုမဆိုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ပိုကောင်းတာကတော့ကြီးမားတဲ့ ISP များအားလုံးဖွံ့ဖြိုးပြီးစီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ့် Open Subscription format ။ စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်များကိုအ ၀ င်စာထဲသို့ ၀ င်ရောက်သည်ဟုအာမခံနိုင်သည့်ကိရိယာများကိုတီထွင်ချင်သည်ထက်ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်ဂူဂဲလ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာကိုအသုံးပြုရန်အလုံအလောက်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ရလာဒ်ကတော့စိတ်ကူးကောင်းကောင်းဖြစ်မှာပါ၊ စပမ်း - အခမဲ့စာအ ၀ င်ပေါက်များနှင့်နီးကပ်စွာခြေလှမ်း။
အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအနေဖြင့်လုံးဝမရရှိနိုင်သော opt-in ယန္တရားကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ ၎င်းသည် ISP ကိုရွေးချယ်ခြင်းကိုတာဝန်ယူလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်နေရာအရပ်ပါပဲ။
သငျသညျ Facebook အီးမေးလ်ဖိတ်ကြားချက်ကိုချင်တယ်ဆိုရင်, Facebook ကနေဖိတ်ကြားချက်ကိုတောင်းဆိုပါ။
Tags: Facebook ကfacebook မေးလ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သတင်းစကားfacebook spam များ
Search Engine Optimization ၏မဏ္Pိုင်သုံးခု